गर्मीयाममा शरीरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने त ? स्वस्थकर र सही खानेकुराको छनोट नै गर्मीबाट पार पाउने उपाय - ज्ञानविज्ञान
गर्मीयाममा शरीरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने त ? स्वस्थकर र सही खानेकुराको छनोट नै गर्मीबाट पार पाउने उपाय
गर्मी मौसम लागेपछि सबैभन्दा ठूलो शरीरलाई अत्यधिक गर्मीबाट बचाउनु हो । कहिलेकाहीँ गर्मी मौसममा शरीरले धान्न नसक्ने गरी गर्मी हुन्छ । गर्मी मौसममा देखिने मौसमको परिवर्तनले शारीरिक असन्तुलन पैदा हुन्छ । जसले जीउ सुन्निने, दिक्दारी हुने, विभिन्न संक्रमण हुनुका साथै बढी रिस उठ्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् ।
त्यसो भए गर्मीयाममा शरीरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने त ? स्वस्थकर र सही खानेकुराको छनोट नै गर्मीबाट पार पाउने उपाय हो । खाना खानु मानिसको आवश्यकता हो ।
तर, सही खाने कुराको छनोट गर्नु बुद्धिमत्ता हो । गर्मी मौसममा मानिसको शरीरको आन्तरिक ताप पनि बढिरहेको हुन्छ । यो समयमा खाना पचाउने क्षमता पनि कम हुन्छ । त्यसैले हल्का र शरीरलाई चिसो राख्ने खानेकुरा खानुपर्छ । त्यसका लागि प्राकृतिकरुपमा नै गुलियो, तीतो र चिसो राख्ने खाना राम्रो हुन्छ ।
यहाँ गर्मी मौसमको लागि उचित हुने केही खानेकुरा उल्लेख गरिएको छ
तीतो, हरियो तरकारीहरु यो मौसमका लागि उचित हुन्छ । यसमा काँक्रो, कुरिलो, मटरकोसा, आलु, गेडागुडी, धनियाँ, बन्दा लगायतका तरकारी यो मौसममा राम्रो हुन्छ । तर, यो मौसममा रायो, मूला, प्याज, टमाटरजस्ता तरकारी भने सकेसम्म खानु हुँदैन ।
यो मौसममा गुलियो फलफूहरु खानु राम्रो हुन्छ । नरिवल, स्याउ, तरबुजा, अंगुर, आँपजस्ता फलफूल यो मौसममा खानु राम्रो हुन्छ । एभोकाडो पनि यो मौसमको लागि लाभदायक मानिन्छ । तर, अमिलो अंगुर, कटहर, कागती, सुन्तला, स्टबेरीजस्ता फलफूललाई भने सकेसम्म त्याग्नु नै राम्रो हुन्छ ।
३. प्राकृतिक रुपमा गुलियो खानु
गर्मीयाममा आफ्नो खानेकुुरामा मह पनि मिसाउनु राम्रो हुन्छ । महका साथै उखु पनि केही मात्रामा मिसाउन सकेको खण्डमा शरीरको तापलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
गर्मीयामको लागि घ्यू सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नरिवलको तेलले पनि शरीरको तापमान घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । अलमण्ड, तोरी, लितको तेल भने प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
५. नट्स र बीउ
गर्मीयाममा फर्सीको बियाँ, सूर्यमुखीको बीउ, काँक्रोको बीउ, तरबुजाको बीउको सेवन राम्रो हुन्छ । काजु बदाम र ओखरले भने मानिसको शरीरको ताप बढाउन सहयोग गर्छ ।
सिमी, मास, भटमास लगायतका गेडागुडी गर्मीयामको लागि उचित हुन्छ । प्रशोधित भटमासका उत्पादन भने यो मौसमको लागि हानिकारक हुन्छ ।
चामल, गहुँ, जौ लगायतका अन्नहरु मकै, कोदोजस्ता अन्न भन्दा गर्मीयामको लागि उचित मानिन्छ ।
८. डेरी उत्पादन
घ्यू, क्रिम, नौनी, पनीर, घरेलु चीज, दूध लगायतका डेरी उत्पादन गर्मीयाममा शरीरको लागि उचित मानिन्छ ।
रातो मासुभन्दा पनि सेतो मासु गर्मीयामको लागि उचित मानिन्छ । अण्डा र खसीको मासु पनि गर्मीयाममा राम्रो मानिन्छ । तर, सुँगुर, भेडाच्यांग्रा, माछाको मासु भने गर्मीको लागि उचित मानिँदैन ।
गर्मि मौसममा धेरै मानिसलाई भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ । त्यसका लागि यी तल दिएका खानेकुराहरु खानु पर्छ ।
गर्मी मौसममा कस्तो खानेकुरा खाँदा फाईदा हुन्छ ?
लौकामा हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुर्याउने थुप्रै गुण हुन्छन् । यसमा पानीको मात्रा धेरै हुने भएकाले गर्मीमा यसले शरीरलाई हाइड्रेट बनाइराख्छ । रातिको खानामा लौका खाएपछि पानी कम खादा पनि डिहाइडे«शन हुन पाउँदैन । यदि तपाईंलाई गर्मीमा कुनै पनि खाना राम्रोसँग पच्दैन भने लौकाको सेवन गर्नु वेश हुन्छ । लौकालाई तरकारी, अचार तथा खीर बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
कसरी राख्ने गर्मी र झरीमा खाद्य पदार्थ सुरक्षित ?
त्यसै पनि अहिले गर्मीको मौसम । त्यसमाथी मनसुन सक्रिय भएको बेलामा पर्ने अविरल वर्षाले हाम्रो स्वास्थमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यो सिजनमा हामीले खाने खाद्य पदार्थहरु अरु बेलाको तुलनामा अझ चाँडो दुषित हुने सम्भावना रहन्छ ।
खाद्य पदार्थलाई कसरी दुषित हुनबाट जोगाउने ? अथवा खाद्यपदार्थलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? यो आजको बुझ्नै पर्ने आवश्यकता हो । हामीले उपभोग गरिरहेका सबै प्रकारका खाद्य पदार्थहरु कत्तिको स्वच्छ, ताजा अथवा स्वास्थको लागि सुरक्षित छन् ? यसबारेमा हामीले विचार गर्नैपर्छ ।
पछिल्लो समय तरकारीमा विषादीको प्रयोग राष्ट्रव्यापी मुद्दा नै बनिरहेको छ । हामीले खाने अधिकांश तरकारीहरुमा आवश्यकता भन्दा बढि विषादीहरु प्रयोग भैरहेका छन् भन्ने समाचारहरु हरेक दिनजसो प्रकाशित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले खाने खाद्य पदार्थ जस्तै अन्न, तरकारी, फलफूल आदि विषालु रसायनबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु अनिवार्य छ ।
विषालु रसायन प्रयोग भएका खाद्यपदार्थहरु हाम्रो स्वास्थका लागि हानिकारण हुन्छन् । त्यसै पनि अहिले खाद्य पदार्थहरुमा विषादी धेरै छन् । हामीले खाने खानामा विषादीको मात्रा कति छ भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु अनिवार्य छ ।
थोरै सावधानी अपनाइएमा हामी शरीरलाई हानी गर्ने विषालु रसायनबाट छुटकारा पाउन सक्छौं । यहाँ केही खाद्यपदार्थलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
खाद्य पदार्थलाई कसरी जोगाउने ?
रोटी प्रायः सबैलाई मनपर्ने खाद्य पदार्थ हो । रोटी प्राय गहुँको पिठोबाट बनाइन्छ । हामीले स्वस्थकर रोटी खाने हो भने गहुँ नै स्वस्थ हुनु अनिवार्य छ । गहुँलाई डीडीटी, एचसीएच, एफ्लाटक्सिन जस्ता विषालु रसायनका साथै मुसाको रौं तथा मलले समेत दुषित बनाइरहेको हुन्छ । ती पदार्थले हाम्रो प्रजनन प्रकृयामै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने रगतलाई समेत दुषित बनाउँछ ।
यसबाहेक ती पदार्थले मस्तिष्क तथा छातीको क्यान्सर नै हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसबाट बच्नका लागि गहुँ पिस्ने बेलामा नै ध्यान दिनु पर्छ । गहुँ पिस्नुभन्दा अघि त्यसको सबै भुस निकाल्नुपर्छ । भुससँगै त्यसमा भएको किटनासक विषादी पनि स्वतः निस्कन्छ ।
त्यसबाट पनि बाँकी रहेको विषादी रोटी पकाउने अथवा सेक्ने क्रममा नष्ट भएर जान्छ । त्यसैले गहुँ किनेपछि राम्ररी सफा गरेर मात्र पिसाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
चामलमा पनि विभिन्न प्रकारका दुषित पदार्थहरु पाउन सकिन्छ । ती मध्ये प्रमुख हुन चामलमा प्रयोग गरिने डीडीटी तथा आरसेनिक । ती दुषित पदार्थले हाम्रो स्मरणशक्ति तथा प्रजजन क्ष्ँमतामा कमि ल्याउँछ । ती पदार्थले हाम्रो रगत समेत दुषित बनाउँछ ।
छाती तथा मस्तिष्कको क्यान्सर हुने सम्भावना पनि अधिक हुन्छ । त्यसैले दुषित पदार्थ मिसिएको चामल नै किन्नबाट जोगिनु पर्छ । त्यसका लागि हामीले किन्ने चामलको रंगमा ध्यान दिनु पर्छ । हुन त अधिकांश चामलको रंग सेतो नै हुन्छ, तर सेतो बाहेकका रंगका चाममा एफ्लाटक्सिन हुन सक्छ ।
त्यस्ता चामल पाक्न समेत समय लाग्छ । त्यसैले चामललाई स्वस्थ बनाउनका लागि पकाउनुभन्दा आधा घण्टा अघि नै चामललाई चार पटक पानीले पखाल्नु पर्छ र अन्त्यमा पानीमै भिजाएर राख्नु पर्छ । यसबाट चामलमा भएको दुषित पदार्थहरुलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ ।
चामलजस्तै दाल पनि हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हो । दाललाई पनि केही पदार्थहरुले दुषित बनाइरहेका हुन्छन् । ती मध्ये मुसाको कपाल, मुसाको लिंड तथा एचसीएच प्रमुख हुन् । ती दुषित पदार्थले पनि स्मरणशक्ति कम गराउनुका लागि प्रजजन क्षमतालाई पनि घटाउँछन् । रगतलाई दुषित बनाउनुका साथै छाती र मस्तिष्टकको क्यान्सरको सम्भावना समेत बढाउँछन् । दालमा पाइने दुषित पदार्थबाट जोगिने उपायहरु पनि छन् ।
त्यसका लागि दाल पकाउनुभन्दा एक घण्टा अघि नै दाललाई पानीमा भिजाउनु पर्छ । दाल पकाउन बसाउनुभन्दा ठिक अघि चार पटक पानीले पखाल्नु पर्छ । त्यसपछिमा दाललाई प्रेसर कुकुरमा राखेर पकाउनु पर्छ । दालमा चार-पाँच सिट्ठी लागेपछि अर्थात दाल राम्ररी पाकेपछि मात्रै खानु पर्छ ।
हामीले हरेक दिन प्रयोग गर्ने दूध पनि दुषित हुन सक्छ । दुधमा पाइने दुषित पदार्थहरुमा डीडीटी तथा एचसीएच, एन्डासुलफोन, सिन्थेटिक दूध, हाइट्रोजन प्याराअक्साइड आदि हुन् । यी पदार्थहरुले हाम्रो मृगौला, कलेजो, मांशपेशी तथा आन्द्रामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । दुषित दूधको सेवनले पेटको अल्सर नै हुने सम्भावना हुन्छ । दूषित दूधबाट जोगिनका लागि साइकलमा दूध बेच्नेहरुसँग दूध किन्नै हुँदैन ।
उनीहरुले दूधमा पानी मिसाउने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । यसबाहेक गुणस्तरीय डेरीबाट उत्पादित दूध मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ । डेरीका दूधहरु पास्चराइड गरिएको हुनाले पेस्टिसाइडको प्रभाव कम हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दूध सेवन गर्नुअघि त्यसलाई राम्ररी उमाल्नु अति नै अनिवार्य छ ।
हामीले तरकारी पकाउँदा प्रयोग गर्ने मसला पनि दुषित हुन सक्छ । त्यसमा अप्राकृतिक रंग, माइक्रो टक्सिनका साथै अखाद्य धूलो प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । ती दुषित पदार्थले स्वास्थमा धेरै नै प्रभाव पार्छ । खासगरी दुषित मसलाले हाम्रो आन्द्रालाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक् छ।
बेसारको रंग पहेंलो हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यद्यपि, बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको बेसारको रंग आवश्यकता भन्दा बढि नै पहेंलो छ भने त्यसमा मिसावट छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ । बेसारमा क्रोमाइड नामक रसायन मिसाएपछि उक्त बेसार आवश्यकताभन्दा बढि पहेंलो हुन्छ । त्यसैले बेसार किन्दा प्राकृतिक पहेंलो रंगको बेसार किन्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
खुर्सानीको धूलो पनि पनि विभिन्न प्रकारका अखाद्य धूलो मिसाइएको पाइन्छ । स्वस्थकर खुर्सानीको धूलो घरमै बनाउनु राम्रो हुन्छ । सुकेको खुर्सानी किनेर त्यसलाई घरमै पिस्नाले स्वस्थ धूलो तयार पार्न सकिन्छ ।
यसका साथै मरिच, जीरा, अलैंची, दालचिनी तथा धनियाँ जस्ता खाद्य पदार्थलाई घरमै पिसेर विभिन्न प्रकारका मसला बनाउन सकिन्छ ।
Don't Miss it हामीले हाम्रो शरीरको आफैं घाउ पुरिने क्षमताको बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं । कसरी पुरिन्छ घाउ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले ?
Up Next किन खाने फापर ? फापरमा यति धेरै पोषणतत्व पाइन्छ – जानीराखौ